ဥရောပမော်ကွန်းခရီးသွားခြင်း | စာမျက်နှာ2၏ 22 | တစ်ဦးကရထား Save
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာစပိန်, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ, မီးရထားခရီးသွားလာတူရကီ, ဥရောပခရီးသွား
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာစပိန်, ...
အဆိုပါ coronavirus ဖြစ်ပွားကမ္ဘာတဝှမ်းကလူများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကြီးမားအကြောင်းမရှိခဲ့, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအကြီးမြတ်ဆုံးကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးခရီးသွားများအတွက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း. ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြပြီးလက်မှတ်တွေကိုမကြာခဏပြီးသားကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကြောင့်,, ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်စေ…
ဒါကြောင့်သင်ကနောက်ဆုံးတော့ပြုပါတယ်. သငျသညျအလုပျမှာသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်များအတွက်အတွက်ထားပြီးပြီ, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်များဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရေတွင်းတစ်တွင်း-ထိုက်တန်တဲ့အားလပ်ရက်များအတွက်ဟန်ဂေရီကူးခေါင်းနှစ်လုံး. ထိုရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းပါတယ်စဉ် – နောက်ဆုံးတော့, ဘူဒါပက်လှပသောမြို့ဖြစ်၏ – ကိုယ့်ကိုကိုယ်မရောင်းကြဘူး…
မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာဟန်ဂေရီ, ဥရောပခရီးသွား